कांग्रेसले प्रस्ताव गर्‍यो प्रदेश २ को नाम मिथिला–भोजपुरा नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ को नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’ प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसले विहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’ र राजधानी जनकपुर तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। धैर्यकान्त दत्त
प्रचण्डको विश्लेषण : वैकल्पिक सरकारका लागि देउवा सकारात्मक
प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनका लागि सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा अविश्वास प्रस्ताव उपयुक्त विकल्प रहेको माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ। तर, माओवादी एक्लै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने स्थितिमा नहुँदा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को साथ खोजिरहेको छ। धैर्यकान्त दत्त
ओलीको सहारा महन्थ!
केन्द्रका साथै प्रदेशको राजनीतिसमेत उथलपुथल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष ठाकुरसँग ‘वन टु वन’ वार्ता गरेका हुन्। जसपाले उठाइरहेका मागबारे छलफल भएको बताइए पनि अन्तर्य भने केन्द्रका साथै प्रदेशहरूमा सहकार्यका लागि ओलीले जसपाको साथ खोजिरहेको बुझ्न कठिन छैन। धैर्यकान्त दत्त
आज वर्ष २०७७ को अन्तिम दिन। नयाँ वर्ष सुरू भएसँगै सारा विश्वका साथै कोरोना महामारीले नेपालीलाई पनि लखेटिरह्यो। जसको परिणामस्वरुप झन्डै ६ महिनासम्म नेपाली जनता ‘लकडाउन’ सँग जुझ्न बाध्य भए। कोरोनाको चपेटामा परेर कतिपयले ज्यान गुमाए, धेरैको रोजगारी गुम्यो। आर्थिक अवस्था झनै तल खस्कियो। धैर्यकान्त दत्त
जसपाको ध्येय : आफ्नै नेतृत्वमा सरकार
नयाँ सरकार गठनका लागि सत्ताको केन्द्रमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अन्ततः आन्तरिक छलफल सुरू गरेको छ। सत्तासहकार्य आफूहरूको प्राथमिकतामा नरहेको बताउँदै आइरहेको जसपाभित्र सरकार गठनबारे छलफल सुरू भएको हो। धैर्यकान्त दत्त
नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस बलियो बहुमत संख्या खोजिरहेको छ। र, वैकल्पिक सरकार गठन गर्न प्रयास जारी रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। तर, जसपा प्रष्ट नहुँदा सरकार गठनको बाटो सहज हुन नसकेको कांग्रेसको भनाइ छ। धैर्यकान्त दत्त
अहिलेको राजनीतिक परिदृष्यमा सत्ताको चाबी पूर्णरूपले जसपाको हातमा गएको छ। र, सम्भवतः त्यस्तै अवस्थाको आँकलन गरेर प्रधानमन्त्री ओली सुरूदेखि जसपासँग सम्वाद गरिरहेका छन्। जसपाका नेताहरू पनि आफूहरूले उठाएको मागबारे प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको र काम पनि अगाडि बढिसकेको दावी गरिरहेका छन्। धैर्यकान्त दत्त
‘ओलीजीसँग मेरो लगनगाँठोको चर्चा बजारमा चलिरहेको छ। त्यस्तो केही पनि होइन। उहाँले त सरकारमा गएकै दिनदेखि हामीलाई आउन भनिरहनु भएको छ,’ ठाकुरले भने,‘हामीले हाम्रा मागबारे नै कुरा राख्दै आएका छौं। त्यसमा उहाँ सकारात्मक नै देखिनु भएको छ।’ धैर्यकान्त दत्त
‘महन्थ ठाकुर कांग्रेसबाट आएका हुन्। पूरा डेमोक्रेसीमा भिजेका मान्छे हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसमा स्पेस नपाएर उनी मधेशी दलमा गएका हुन्। उनमा भ्रष्टाचारको दाग छैन। उनी भारतका नरसिंहा राव जस्तै हुन्। सबैलाई मिलाएर लग्नसक्ने व्यक्ति।’ धैर्यकान्त दत्त
बिच्किए उपेन्द्र : महन्थ–राजेन्द्रले जोगाउलान् एकता?
नयाँ सरकार गठनबन्धनको केन्द्रमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। एमाले वा कांग्रेस–माओवादीसँग सहकार्य गर्ने विषयमा जसपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। धैर्यकान्त दत्त